Iyo 5 Yemagariro Midhiya Manyepo eMabhizinesi | Martech Zone
Munguva pfupi yapfuura, ndakabvunzurudzwa uye ndikabvunzwa kuti makambani anogadzira zvisirizvo anoita kana achigadzira nekushandisa zano ravo rezvemagariro. Chiitiko changu chingangopesana nevazhinji vevashandi kunze uko, asi - mukutendeseka kwese - ndinofunga kuti indasitiri ino yakura uye mhedzisiro inozvitaurira.
Zvemagariro Midhiya Pfungwa # 1: Zvemagariro Media Chiteshi Chekutengesa
Makambani anowanzo tarisa pasocial media kunyanya se kushambadzira chiteshi. Zvemagariro venhau ndeye kutaurirana chiteshi iyo inogona kushandiswa kushambadzira - asi haizi chete yekushambadzira chiteshi. Chinhu chekutanga makambani anomhanyira mairi pavanopinda pasocial media kazhinji chichemo - uye ikozvino vanofanirwa kuzvigadzirisa zvinobudirira sezvo nyika iri kutarisa. Zvemagariro midhiya ndizvo zvinotarisirwa nevateereri kunyangwe yako kambani ichiona maitiro fanira kushandiswa. Kusaterera kune izvi zvikumbiro kunoparadza chero yemagariro midhiya kushambadzira zano iwe yawave waronga.
Zvemagariro Midhiya Kufungidzira # 2: Kudzoka paInvestment Inofanirwa Kuitwa nekukurumidza uye Kuyerwa Nyore
Makambani anoda kuyera mashandiro uye kudzoka mukudyara mune zvemagariro midhiya ne yega tweet kana kugadzirisa. Zvakafanana nekuyera kubudirira kwechikwata mushure mekunge varova ngoma yekutanga. Yako midhiya midhiya inodzoka pane investment inogona chete kuyerwa mushure mekunge iwe waunza kukosha kune vateereri, vateereri (kuteerera) vanova nharaunda (kugovana), uye iwe unovaka zvese masimba uye kuvimba muindastiri yako. Mune mamwe mazwi, iwe unofanirwa kugadzira mimhanzi hombe usati watarisira kudzoka! Zvakare, kudzoka pasocial media kunowedzera nekufamba kwenguva - kuvaka mhanya apo iwe uchifadza vateereri vako uye nekuvaka nharaunda inotanga kudzokorora meseji yako. Iri blog rava nemakore gumi uye chete mumakore mashanu apfuura mari yaikura kusvika padanho rekuvaka bhizinesi rakatenderedza.
Zvemagariro Midhijisoni # 3: Kushambadzira Kunofanirwa kuve Kuteedzera kune Social Media
Izvi zvine chekuita ne # 1, asi makambani anowanzo gumira mameseji enhau kune vebazi rekushambadzira, avo kazhinji vasina kugadzirira kupindura. Kushambadzira kunowanzo shanda mukumaka nekutumira mameseji - asi kwete pakupindura. Vatengi Sevhisi, Ruzhinji Rwehukama neveVatengesi vashandi ndizvo zviwanikwa mukambani yako vanoisa tarisiro uye midhiya mazuva ese, teerera uye upindure kune zvinonetsa, uye unzwisise maitiro ekugadzirisa vanopokana. Kuendesa yakakura pasocial media zano inofanirwa kusanganisira vashandi ava apo kushambadzira kunobatsira kugadzira mameseji, kuongorora uye kugovana pane chiteshi, uye kuyera kukanganisa.
Social Media Manyepo # 4: Social Media Mishaps Makambani Anoparadza
Makambani anotenda kuti mameseji avo pasocial media anofanira kunge akakwana, pasina zvikanganiso. Zuva nezuva, vhiki nevhiki, uye mwedzi nemwedzi tinoona iyi mienzaniso inoshamisa yekuti makambani akaita sei chimwe chinhu icho nyanzvi yemagariro enhau yavanodaidza kuti masocial media njodzi. Vanogona kunge vari zvikanganiso, asi havawanzo kuita njodzi. Kana iwe ukatarisa kumusoro kwese kusanzwisisika zvikanganiso pasocial media nemakambani, ruzhinji rwakave narwo HAPANA kukanganisa pakutengesa, mitengo yemasheya, kana purofiti. Makambani anokwanisa zvachose kuita zvikanganiso uye kugadzirisa zvakakwana kubva kwavari. Muchokwadi, isu taona iko kunzwika kwekukanganisa kwave kazhinji kuchikura kutengesa kwekambani sezvo nhepfenyuro dzenhau uye zvimwe zvitoro zvemagariro zvinoratidzira nyaya iyi kupfuura izvo chero kushambadzira kwaigona kunge kwakabhadhara. Iyo zano inouya mukugadziriswa kwekanganiso uye kudzoreredza kunogona kuve rombo rakakura kubhizinesi sezvo ichivaka kuvimba nekuvimbika nevateereri.
Zvemagariro Midhiya Pfungwa # 5: Yemagariro Midhiya Yemahara
Kutsvaga, kurapa, kushambadzira, kupindura uye kusimudzira chako chiratidzo pasocial media haina mahara. Muchokwadi, kana iwe ukaita rinotyisa basa, inogona kunge iri kutambisa kukuru kwenguva nesimba kukambani yako. Zvinogona kukutengera iwe kutengesa pane kunyatso kuzviita. Padivi repuratifomu, masocial media chiteshi seFacebook, Twitter, uye Pinterest ari kusundidzirwa nesimba nevashambadzi vavo kuti vaite mari… saka kugona kweshoko rako kukwidziridzwa mumasocial media pasina kutenga vamwe vateereri kuri kudzikira mazuva ese. Kugadzira mabhajeti uye zviwanikwa kuti uwane, curate, kushambadza uye kupindura pasocial media kuti ukure kusvika kwako kwakakosha.
Kubvumirana kana kupokana? Ndezvipi zvimwe zvisiri izvo zvaunotenda zviripo kunze uko?
Tags: blundersmhosho dzebhizinesibhizinesi rezvenhau zvikanganisovakasunungukazvisizvozvakaipazvikanganisomutoropasocial media blunderszvemagariro vezvenhau zano
Makambani mazhinji anotenda kuti budiriro yesocial media inogona kuvakwa muzuva. Vatengesi vanofanirwa kugara vachipa ruzivo rwakakodzera uye kuvaka mukurumbira wekambani yavo kuti vagadzire hukama hunogara kwenguva refu nevatengi vavo kuti vaone mhedzisiro iri nani mumushandirapamwe wesocial media.